संयुक्त राष्ट्रसंघमा नगरप्रमुख पाण्डेको सम्बोधन – Rajmarg Online
कार्तिक ०५ , २०७७ - बुधबार
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नगरप्रमुख पाण्डेको सम्बोधन
मंगलबार, बैशाख २४, २०७६
तुलसीपुर, वैशाख २४ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले न्युयोर्कमा जारी दिगो विकासका लागि विश्व वन सम्मेलनलाई सम्वोधन गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा १ सय ९२ भन्दा वढि देशको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पाण्डे त्यहाँ पुगेका हुन् ।
सभालाई सम्वोधन गर्दै उनले वनजंगलले जलवायु परिवर्तनलाई न्युनीकरण गर्नका लागि अहम् भुमिका खेलेको कुरामा जोड दिएका थिए । नेपालको सामुदायिक वनको चर्चा गर्दै पाण्डेले खाना,काठ, विभिन्न वस्तुका साथै सेवाका लागि सामुदायिक वनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । नेपालको वन संरक्षण गर्नमा सामुदायिक र निजी वनको भुमिका अहम् भएको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालमा सामुदायिक र पारिवारीक निजी वनले उचित व्यवस्थापन गरेर वनबाट धन आर्जनमा उल्लेख्य भुमिका वहन गरेको उनको कथन थियो । सीमान्तकृत र आर्थिक रुपमा विपन्न जनताका लागि हरित रोजगार सृजना गर्न सके वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।
स्थानीय सरकारले जिविकोपार्जनका लागि वन व्यवस्थापनका साथै हरित रोजगार सृजनाका महत्वपूर्ण भुमिका वहन गर्न सक्ने कुरा समेत उनले वताएको प्रेस संयोजक वसन्त आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
रुपन्देहीमा थप दुई संक्रमितको मृत्यु
सल्यानमा बलात्कार आरोपमा दुई जना पक्राउ
चाडपर्वमा पनि बढेन् व्यापार
अभिनेत्री काजलबारे रोचक कुराहरु
उच्च रक्तचाप कम गर्न के के खाने ?
कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ?
धनगडीमा २ प्रहरीको हत्या गर्ने ७ जना सार्वजनिक
स्विमसुटमा नायिका वर्षा
दिल्लीमाथि पञ्जाबको जित, दिल्लीका धवनले राखे यस्तो कीर्तिमानी
घोराहीकी एक महिला पनि कोरोना संक्रमित युवासंगै जहाँजमा सवार
दाङलाई राजधानी बनाउन मुख्यमन्त्री सक्रिय
बसले माेटरसाईकललाई ठक्कर दिदाँ दाङमा एक जनाकाे मृत्यु
थारुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको २० र २१ गते नेपाल बन्द
दाङमा डेंगुले एक जनाको मृत्यु
© 2020 www.rajmargonline.com